Midowga Yurub oo Dalab cusub u soo diray Farmaajo iyo Rooble, kana hadlay khilaafkooda - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Midowga Yurub ayaa ka dalbaday Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Rooble inay soo afjaraan khilaafkoooda siyaasadeed.
War uu soo saaray Ku-xigeenka Guddoomiyaha Midowga Yurub ee dhinaca siyaasadda Josep Borrell ayaa lagu yiri: “Midowga Yurub wuxuu ugu baaqayaa Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed iyo Ra’iisul Wasaare Rooble inay soo afjaraan is-maandhaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya xilligan”
Warka ayaa lagu sheegay in si nabadgelyo ah loogu socdon Geedi socodka doorashadu, iyadoo la raacayo jadwalkii hore loogu heshiiyay ee 27 May 2021. Doorashada waxay fure u tahay bedqabka dadka Soomaaliyeed.
Midowga Yurub ayaa dhammaan dhinacyada Siyaasadda Soomaaliya ugu baaqay inay is-xakameeyaan oo ilaaliyaan xasilloonida ee Soomaaliya iyo tan Gobolka.
Mareykanka iyo Beesha Caalamka ayaa hore ugu baaqay Farmaajo iyo Rooble inay soo afjaraan khilaafkooda si uusan halis ugu noqon Doorashada.
Previous articleFahad Yaasin oo ka haray Diyaaradda Turkish Airlines ee maanta Muqdisho timid iyo Dib usoo laabashadiisa oo…
Next articleGolaha Amniga ka hadlay khilaafka joogtada ah ee Madaxda Soomaaliya (Warbixin uu siiyey James Swan)